Teen Pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
”ပွောမယုံ၊ ကွုံဖူးမှသိ” ဆိုသလို တအံ့တသွလကျဖြားခါရလောငျအောငျ မယုံကွညျနိုငျဖှယျ အဖွဈ အပကျြမြားကား ညနဆေေးခနျးလေးထဲမှာ ကွုံတှခေဲ့ရတာမြားပါသညျ။
ဝတ်ထုတှထေဲမှာသာ ဖတျရမညျဆိုပါက ဘယျလိုမြှယုံနိုငျမညျမဟုတျပါ။ ဒါတှဟောစိတျကူးယဉျပွီး ရေးထားတာဟုသာ ထငျကွပါလိမျ့မညျ။ ပွီးတော့ ထိုအဖွဈအပကျြတှဟော ဗဟုသုတ၊ အသိပညာနညျးပါးလှသညျ့ ကြေးလကျတောရှာမြားမှာဆိုပါကလညျး ယုံကောငျးယုံနိုငျပါလိမျ့မညျ။ အခုလို ရနျကုနျမွို့ကွီးမှာ ကွုံရသညျဆိုသညျက လှနျစှာဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲပငျ။
လကျတှေ့ ကြှနျမကိုယျတိုငျကွုံခဲ့ရမှသာ ဒါတှဟော ဖွဈနိုငျတာပဲဟုလကျခံသိရှိရပါသညျ။
ကိုယျ့ဝမျးထဲမှာအပွညျ့အသိပျနီးပါး ကပျြညပျနသေညျ့ ကိုယျဝနျလှယျထားရတာကို လုံးဝမသိဘူးဆိုသညျ့ အပြိုမအမညျခံ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ညနခေငျးတဈခုမှာ ကြှနျမတှခေဲ့ရပါသညျ။
ထိုကလေးမ ဆေးခနျးလာရသညျ့အကွောငျးကတော့ ခွထေောကျနှဈဖကျ အနညျးငယျဖောရောကျနေ သညျကိုလာပွခွငျးဖွဈပါသညျ။ သူမက (၁၈)နှဈခနျ့ရှိမညျဖွဈပွီး စပို့ရှပျခါးရှညျ အဖွူရောငျနှငျ့ သရီးကှာတား ဘောငျးဘီအနကျရောငျလေး ဝတျထားသညျ။
အတူပါလာသူက အဒျေါဟုပွောပွီး သူမခွထေောကျ ခွခေငျြးဝတျလေးတှေ အနညျးငယျပွညျ့လာသညျဟု ပွောပါသညျ။ ထုံးစံအတိုငျး သူမကို ခုတငျပျေါတကျစပွေီး အထှထှေစေဈဆေးမှု စတငျလိုကျတာနှငျ့ ဝမျးဗိုကျက အနညျးငယျ ပွညျ့ဖောငျးနတော သတိထားမိလိုကျသညျ။
သို့ပမေဲ့ ဗိုကျပူသညျ့ အခြို့အပြိုတှကေလညျးရှိတော့ သူမြားကို မသခြောဘဲ ဗိုကျရှဲတာရိုးရိုးပကျြရယျပွုသလို ဖွဈမှာစိုးရပါသညျ။ ဗိုကျပူလိုကျတာပွောလြှငျ မညျသူကကွိုကျမညျနညျး။
သို့ဖွငျ့ စိတျထဲမှာတော့ ခွထေောကျရောငျသညျဆိုသညျ့ သူတို့ Complain ကိုဦးတညျကာ ကြောကျကပျမကောငျးတာလား ၊ နှလုံးစမျးရမလားစသဖွငျ့ တှေးနမေိပါသညျ။ သှေးပေါငျကလညျး ပုံမှနျပငျ။
သူမ၏ ဝမျးဗိုကျပျေါလကျတငျကွညျ့လိုကျတော့မှ ကြှနျမ၏ နှဈပေါငျးမြားစှာစမျးသပျ၍ အသားကနြေ သော လကျအစုံက သူမဝမျးဗိုကျပျေါမှ အရေးအကွောငျး အခြိုငျ့အဝှမျးလေးမြားကို စတငျခံစားစမျးမိလိုကျပါသညျ။
သနသေား၏ခွလေကျကလေးမြား ကှေးနပေုံကို သှားစမျးသပျမိလသေညျ။
သညျလိုအဖွဈမြိုးမြားစှာ ကြှနျမတို့ ကွုံတှခေဲ့ရဖူးပါသညျ။ သို့ပမေယျ့ နှဈလ၊ သုံးလ၊ အလှနျဆုံး လေး၊ ငါးလခနျ့မှာ သိရှိသှားကွတာ မြားပါသညျ။
လငျကောငျမပျေါဘဲကလေးရသော ဇာတျလမျးမြားကား ရိုးနပေါပွီ။ ဆရာဝနျတှအေတှကျ ထမငျးစား၊ ရသေောကျပါ။ ရညျးစားနှငျ့ မှောကျမှားမိသော အဖွဈအပကျြမြားကား မဆနျးတော့ပါ။ ကြှနျမတို့က ဆရာဝနျ ကငျြ့ဝတျနှငျ့အညီ ဘာမြှလုပျမပေးတော့ နီးရာစုံစမျးပွီး ဖကျြခကြွတာလညျး ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အခြို့လညျးကံကောငျးတော့ ဘာမြှမဖွဈ။ (အကုသိုလျကတော့ မနပေါ။) အခြို့လညျး သကေောငျပေါငျးလဲ၊ အဆဲအဆိုခံ၍ဆရာဝနျမြား လုပျပေးပွီးကောငျးသှားကွ။ အခြို့လညျး သရောပါ နာတာရှညျ။ အခြို့ကပကျြ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ။
ယခုလို မှခေါနီးအခြိနျကွီးတိုငျအောငျ ဗိုကျထဲမှာ ကလေးတဈယောကျလုံးလှယျထားပွီး ဘာမြှမသိကွ ခွငျးမှာ မယုံနိုငျစရာပငျ။
စာပမေောငျနှမတျောသညျ ကြှနျမ၏ဆရာ အိုဂြီဒေါကျတာစိုးလှငျက မိဘမြားက သမီးအပြိုလေးဗိုကျနာ လို့လာပို့တာ ပွီးတော့မှ ကလေးထှကျလာ၍ မှေးပေးလိုကျရသညျဆိုတာမြိုး။
ကွားရစဉျကတော့ အမှတျတမဲ့ပငျ။ အတျောနမျောနမဲ့နိုငျသညျ့ မိသားစုပါလား။ မိနျးကလေးကရော ကိုယျဘာဖွဈနေ တာကိုယျ့ဟာကိုယျတောငျ မသိနိုငျအောငျ အ, လှခလြေား။ သွျော. . . နယျမွို့လေးတှမှောဆိုတော့ ရှိပမေပေါ့လဟေု တှေးမိသညျ။
ဟော … အခုတော့ ဒါရနျကုနျမွို့မှာလေ။
လူစညျကားရာ မွို့၊ အသိပညာတှေ လြှံထှကျနသေောမွို့၊ ကနျြးမာရေးဗဟုသုတတှေ နီးနီးလေးမှာ ကွားသိမွငျနရေပွီး အဖှဲ့အစညျး အမြိုးမြိုးက အစိုးရက ကနျြးမာရေးမွှငျ့တငျနသေော မွို့၊ သညျလိုမွို့မှာ သညျအဖွဈမြိုးက ရုပျပကျြလှနျးလှခလြေား။
ပွီးတော့ စမျးသပျပွီး ခနျ့မှနျးရသလောကျ ကလေးကသေးသေးကှေးကှေး မဟုတျ၊ ရငျညှနျ့နှငျ့ဆီးခုံ ကွားနရောအပွညျ့ ကိုယျအင်ျဂါလေးမြား စမျးသပျမိနတော ထှားမှထှား။
သူမဝတျထားသော ဘောငျးဘီကတော့ ခါးဝတျနရောမှာမတျော၍ ခြိတျနှငျ့ဆှဲခြိတျထားသညျ။ အထဲက ကလေးငယျအစား မသကျမသာရှိလိုကျတာ။ ဘောငျးဘီကို မရမကတျောအောငျခြိတျနှငျ့ ဖိသိပျဝတျထားသညျ။ အထဲမှာ ဘယျသို့ရှိမညျမသိ။
အပျေါက စပို့ရှပျခါးရှညျ ဖားဖားကွီးက အုပျထားတော့ ဘောငျးဘီခါးမတျောတာ ဘယျလိုမြှ မသိနိုငျ။
ယခုခတျေ မိနျးကလေးအင်ျကြီတှကေလညျး ဂါဝနျတှလေို ရှညျရှညျဖားဖားကွီးတှေ၊ ပေါငျလယျ လောကျ ဖားလြားကနြမှေ ဖကျရှငျကသြညျ ထငျနကွေတာ။ အောကျက ဘောငျးဘီတိုနှငျ့ တှဲဝတျကွသညျ။ သူ့ခတျေနှငျ့သူတော့ လှသညျထငျနကွေသညျ။
သူတို့စတိုငျလျက တျောရုံဗိုကျကွီးလညျး မသိနိုငျတော့ အံကိုကျပငျ။ မိဘမောငျဖားမြားလညျး မရိပျမိကွဘူးထငျပါရဲ့။ ရာသီလာလား မေးတော့လညျး “ဟုတျကဲ့” တဲ့။ တဈခုခုတော့ လှဲနပွေီ။ ကိုယျ့လကျကိုယျ ယုံပမေယျ့ ကြှနျမကအပြိုပါ ဆိုလာသူတဈဦးကို အသားလှတျတော့ စတငျမစှပျစှဲဘဲ Ultrasound ရိုကျခိုငျး လိုကျသညျ။
“အထဲမှာ အလုံးလိုလို တှရေ့တယျ။ မတျောလို့သား သားအိမျအလုံးတှေ၊ အကြိတျတှဖွေဈနရေငျခကျမယျ။ ခွထေောကျရောငျတာ အကွောငျးရငျးလညျး ရှာတှနေို့ငျတာပေါ့” ဆိုပွီး မသိမသာ USG ရိုကျခိုငျးလိုကျရသညျ။ တဈညလုံး ထိုမိနျးကလေးအကွောငျး ခေါငျးထဲကမထှကျ။ အမကေိုလညျး ချေါခိုငျးလိုကျသညျ။
နောကျတဈနညေ့နမှော သူတို့အုပျစုကို အစောဆုံးတှရေ့သညျ။ လူကလညျး ရှငျးနသေညျ။ အမနှေငျ့ အဒျေါက အနားမှာ။
သူအမဖွေဈသူကို မွငျလိုကျရတော့ ရငျထဲမကောငျး။ သမီးအပြိုလေးဟု တယုတယအုပျထိနျးခဲ့သူ မိခငျရငျမှာ ဘယျလိုရှိလိမျ့မညျလဲ။ သမီး၏ဗိုကျထဲမှာ မှေးခါနီးသန်ဒသေားလေး တလှယျတပိုးရှိနတောကို နညျးနညျးလေးမြှ ရိပျမိဖျောတောငျ မရသညျ့အမပေါလား။ ဒါတှဟော ဝတ်ထုတှထေဲမှာ မဟုတျဘူး။ စိတျကူးယဉျဗီဒီယိုဇာတျလမျး မဟုတျဘူး။
အမဖွေဈသူ ကမျးပေးလာသညျ့ USG အဖွစောရှကျလေးကို ကွညျ့လိုကျတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ စမျးသပျလာခဲ့သညျ့ ကြှနျမလကျမြား၏ တှရှေိ့ခကျြအတိုငျးပငျ။ သညျမှာ ပိုလာတာက ကိုယျဝနျ ပတျ (၃၀)၊ ယောကျြားလေးတဲ့။
မိမိတို့၏ ပယောဂဖွငျ့ ရှငျသနျကွီးထှားနသေညျ့အပွဈကငျးသော သန်ဒသေားယောကျြားလေးတဈဦး ကတော့ မိခငျ၏ ဝမျးကွာတိုကျထဲမှာ မှေးဖှားရနျ အသငျ့ရှိခပြွေီ။ ဒါကို သူတို့တာဝနျယူရတော့မညျ။ ဒီအခြိနျမှာ လကျထပျပေးလိုကျလြှငျလညျး နောကျနှဈလခနျ့မှာ နစေ့ေ့၊ လစေ့ သားကလေးမှေးဖှားလာတော့ ဘယျလိုရှငျးကွမလဲ။
လူမှုရေးပွဿနာမြားကို ဝငျရှငျးပေးဖို့အထိတော့ ဆရာဝနျမှာ တာဝနျမရှိ။ သို့ပမေဲ့ မိနျးကလေးကို ဆူဆူပူပူ ခွလှေနျလကျလှနျမလုပျဖို့ ဖွဈပွီးသားကို ပွလေညျအောငျ နညျးလမျးကွံဆဖို့တော့ လမျးညှနျအကွံပေးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သညျအခြိနျမြိုးမှာ ဘယျလိုနညျးနှငျ့မြှ ဖကျြခတြာမြိုး သှားမလုပျဖို့၊ အသကျအန်တရာယျ အလှနျနီးလှကွောငျး သတိပေးလိုကျရသညျ။
“သူ့အဖကေ သတျမှာ” ဆိုသညျ့ ညညျးသံလေးတော့ မိခငျဖွဈသူထံမှ ထှကျလာသညျ။ သမီး၏ ရညျးစားကိုသိသလားဆိုတော့လညျး “သူ့ကိုတဈခြိနျလုံးအိမျထဲမှာထားတာပဲ” ဟူသောစကားကွားရသညျ။
“အိမျထဲမှာထားသော သမီးအပြိုလေးမြားအတှကျ”မိဘမြား၏အုပျထိနျးပုံ နညျးလမျးကားထငျသ လောကျမလှယျပါ။
သူတို့ပွနျသှားအပွီးမှာ မိနျးကလေးတို့အတှကျ သညျလိုကိစ်စမြိုးနှငျ့ မတိုးမိစဖေို့ လိငျကိစ်စပညာပေးရနျ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတို့၏ တာဝနျနှငျ့မကငျးသလိုခံစားမိရပါသညျ။
မိခငျတို့တှကျ သမီးအပြိုလေးနှငျ့ ရငျအုပျမကှာ စောငျ့ရှောကျထိနျးသိမျးပေးနဖေို့အခွအေနေ မပေးခဲ့သျော အိမျထဲထညျ့ထားရုံဖွငျ့ စိတျခမြနသေငျ့ပါ။ သညျလိုကိစ်စမြိုးကား သံကှနျခြာ အထပျထပျအခါခါ အုပျထားသျောမြှ စိတျမခရြ။
အကောငျးဆုံးကတော့ သမီးအပြိုဖျောဝငျသညျနှငျ့ သိသငျ့သိထိုကျသညျမြားကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး အသိပေးသှားရမညျ။ ထို့အတှကျ မိခငျ(အုပျထိနျးသူမြား)ဘကျမှလညျး အခွခေံမိနျးကလေးကိစ်စတို့ကို ဦးစှာ နားလညျသိရှိထားသငျ့ပါသညျ။
ဆရာဝနျတို့လညျး မ, သဘာဝကိစ်စမြားကို အထပျထပျအခါခါပွောပွကွ၊ ရေးသားကွနှငျ့ အပျကွောငျး ထပျခဲ့ပွီ။ ကြှနျမတဈယောကျတညျးအနနှေငျ့ပငျ နညျးလမျးမြိုးစုံ၊ ရှုထောငျ့မြိုးစုံနှငျ့ အဖနျဖနျ ပညာပေးဟော ပွော ရေးသားပွီးခဲ့သညျမှာ မရမေတှကျနိုငျတော့။
အတိုငျးအတာတဈခုအထိတာ့ ထိရောကျသှားသညျဟု ပွောနိုငျမညျထငျသညျ။ ကြှနျမတို့အနီးအနား မှာ သညျလိုပွဿနာတှေ သိပျမတှရေ့တော့ဟု ထငျနဆေဲ။
“ပွောမယုံ၊ ကွုံဖူးမှသိ”ဆိုသညျ့ စကားနှငျ့အညီ ကှကျတိမှနျနအေောငျ လာကွုံရသညျ့ သညျအဖွဈမြိုး ကွောငျ့ မ,သဘာဝပညာပေးတှဟေောပွောရေးသားနိုငျလှနျးလှပွီဟု အထငျရောကျနသေညျ့အဖွဈ ကြှနျမတို့၏ ပဈမှတျမြားကား လှဲနတေုနျးပငျ ဖွဈကွောငျးသိလိုကျရပါသညျ။
သို့အတှကျ မိနျးကလေးတို့၏အန်တရာယျမြားအကွောငျး ကြှနျမ၏ပဲ့တငျသံမြားကား မဆုံးနိုငျအောငျရှိခြေ ပါတော့မညျ။
ပွောပါမြားတော့ ဘာမြှမသိတော့သညျ့အဖွဈမရောကျအောငျ လိုတိုရှငျး၊ နားထဲဒကျထိဝငျအောငျ တဈနညျးလှညျ့ပွောခငျြပါသညျ။ အခြိနျမရသောခတျေကွီးထဲမှာ အခြိနျမရသော မိဘအုပျထိနျးသူမြား၊ ရသမြှအခြိနျအတှကျ ဖတျကွ၊ မှတျကွ၊ တဈဆငျ့ပွနျပွောပွကွပွီး နိုငျငံ့သမီးရတနာ အပြိုစငျလေးမြားကို စံခြိနျမီ ထိနျးသိမျးနိုငျကွစရေနျ ရညျရှယျပါသညျ။
(၁) အသကျ ၉ နှဈမှ ၁၄ – ၁၅ နှဈ (အခြို့သော ၁၆-၁၈နှဈအထိ) အတှငျး မိနျးမကိုယျမှ ဓမ်မတာသှေးဆငျးတတျကွောငျး အလဉျြးသငျ့သလို ပွောထားပါ။
(၂) ထိုကိစ်စသညျ သဘာဝဖွဈကွောငျး၊ ရှကျရှံ့အားငယျစရာမလိုကွောငျး၊ သနျ့ရှငျးလုံခွုံစှာ နထေိုငျတတျဖို့ အသိပေးပါ။
(၃) ထိုကိစ်စဖွဈပျေါလာသညျနှငျ့တဈပွိုငျနကျ ယောကျြားလေးမြားနှငျ့ အနအေထိုငျ သတိထားရနျ၊ ကိုယျဝနျရှိတတျပုံမြား ပွောပွထားပါ။
(၄) ယောကျြားလေးမြားကို တရားလှနျ ရှောငျရှားရှကျရှံ့နစေရာလညျးမလိုဘဲ ပုံမှနျသူငယျခငျြးမိတျဆှအေဖွဈပေါငျးရနျ။
(၅) မိမိတုိ့၏ လြှို့ဝှကျလုံခွုံအပျသော နရောမြားနှငျ့ တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေးအလေးပေးရနျ။
(၆) မိမိ၏ ပုံမှနျဓမ်မတာပျေါနရောမှ ထိမျသှားလြှငျ မိခငျ(အုပျထိနျးသူ)ကိုအသိပေးရနျ။ (ဓမ်မတာ မလာသောအကွောငျးမြား အမြိုးမြိုးရှိသညျ့အနကျ ကိုယျဝနျရှိနေ၍ မလာခွငျးကား အပြိုတှအေတှကျ အထူးသတိထားသငျ့သောအခကျြ ဖွဈကွောငျး အလေးပေးပွောပွထားရနျ)
(၇) မညျသို့သော အကွောငျးပွခကျြနှငျ့မြှ (လကျမထပျမီ) ဆနျ့ကငျြဘကျယောကျြားမြားနှငျ့ ဆိတျကှယျရာတှငျ မတှဆေုံ့မိရနျ။
အထူးသဖွငျ့တော့ ဟိုမသှားရ၊ သညျမသှားရ၊ ဘာမလုပျရ၊ ညာမလုပျရဟု အမိနျ့အာဏာသံဖွငျ့ အုပျထိနျးမညျ့အစား ဘာကွောငျ့သတိပေးတားမွဈရကွောငျးကို အကြိုးသငျ့ အကွောငျးသငျ့ ရှငျးလငျးအသိပေး ထားပွီးဟု အုပျထိနျးခွငျးက အသငျ့တျောဆုံးဖွဈကွောငျး ညနဆေေးခနျးမြားထဲမှ ကွုံရသညျမြားအတှကျ ပဲ့တငျထပျလိုကျရပါသညျ။
”ပြောမယုံ၊ ကြုံဖူးမှသိ” ဆိုသလို တအံ့တသြလက်ဖျားခါရလောင်အောင် မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် အဖြစ် အပျက်များကား ညနေဆေးခန်းလေးထဲမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာများပါသည်။
၀တ္ထုတွေထဲမှာသာ ဖတ်ရမည်ဆိုပါက ဘယ်လိုမျှယုံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါတွေဟာစိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးထားတာဟုသာ ထင်ကြပါလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ ထိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာနည်းပါးလှသည့် ကျေးလက်တောရွာများမှာဆိုပါကလည်း ယုံကောင်းယုံနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အခုလို ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ ကြုံရသည်ဆိုသည်က လွန်စွာဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပင်။
လက်တွေ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရမှသာ ဒါတွေဟာ ဖြစ်နိုင်တာပဲဟုလက်ခံသိရှိရပါသည်။
ကိုယ့်ဝမ်းထဲမှာအပြည့်အသိပ်နီးပါး ကျပ်ညပ်နေသည့် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတာကို လုံးဝမသိဘူးဆိုသည့် အပျိုမအမည်ခံ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်မတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ထိုကလေးမ ဆေးခန်းလာရသည့်အကြောင်းကတော့ ခြေထောက်နှစ်ဖက် အနည်းငယ်ဖောရောက်နေ သည်ကိုလာပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူမက (၁၈)နှစ်ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး စပို့ရှပ်ခါးရှည် အဖြူရောင်နှင့် သရီးကွာတား ဘောင်းဘီအနက်ရောင်လေး ၀တ်ထားသည်။
အတူပါလာသူက အဒေါ်ဟုပြောပြီး သူမခြေထောက် ခြေချင်းဝတ်လေးတွေ အနည်းငယ်ပြည့်လာသည်ဟု ပြောပါသည်။ ထုံးစံအတိုင်း သူမကို ခုတင်ပေါ်တက်စေပြီး အထွေထွေစစ်ဆေးမှု စတင်လိုက်တာနှင့် ၀မ်းဗိုက်က အနည်းငယ် ပြည့်ဖောင်းနေတာ သတိထားမိလိုက်သည်။
သို့ပေမဲ့ ဗိုက်ပူသည့် အချို့အပျိုတွေကလည်းရှိတော့ သူများကို မသေချာဘဲ ဗိုက်ရွှဲတာရိုးရိုးပျက်ရယ်ပြုသလို ဖြစ်မှာစိုးရပါသည်။ ဗိုက်ပူလိုက်တာပြောလျှင် မည်သူကကြိုက်မည်နည်း။
သို့ဖြင့် စိတ်ထဲမှာတော့ ခြေထောက်ရောင်သည်ဆိုသည့် သူတို့ Complain ကိုဦးတည်ကာ ကျောက်ကပ်မကောင်းတာလား ၊ နှလုံးစမ်းရမလားစသဖြင့် တွေးနေမိပါသည်။ သွေးပေါင်ကလည်း ပုံမှန်ပင်။
သူမ၏ ၀မ်းဗိုက်ပေါ်လက်တင်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်မ၏ နှစ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်၍ အသားကျနေ သော လက်အစုံက သူမ၀မ်းဗိုက်ပေါ်မှ အရေးအကြောင်း အချိုင့်အ၀ှမ်းလေးများကို စတင်ခံစားစမ်းမိလိုက်ပါသည်။
သနေသား၏ခြေလက်ကလေးများ ကွေးနေပုံကို သွားစမ်းသပ်မိလေသည်။
သည်လိုအဖြစ်မျိုးများစွာ ကျွန်မတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါသည်။ သို့ပေမယ့် နှစ်လ၊ သုံးလ၊ အလွန်ဆုံး လေး၊ ငါးလခန့်မှာ သိရှိသွားကြတာ များပါသည်။
လင်ကောင်မပေါ်ဘဲကလေးရသော ဇာတ်လမ်းများကား ရိုးနေပါပြီ။ ဆရာဝန်တွေအတွက် ထမင်းစား၊ ရေသောက်ပါ။ ရည်းစားနှင့် မှောက်မှားမိသော အဖြစ်အပျက်များကား မဆန်းတော့ပါ။ ကျွန်မတို့က ဆရာဝန် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ဘာမျှလုပ်မပေးတော့ နီးရာစုံစမ်းပြီး ဖျက်ချကြတာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အချို့လည်းကံကောင်းတော့ ဘာမျှမဖြစ်။ (အကုသိုလ်ကတော့ မနေပါ။) အချို့လည်း သေကောင်ပေါင်းလဲ၊ အဆဲအဆိုခံ၍ဆရာဝန်များ လုပ်ပေးပြီးကောင်းသွားကြ။ အချို့လည်း သေရာပါ နာတာရှည်။ အချို့ကပျက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။
ယခုလို မွေခါနီးအချိန်ကြီးတိုင်အောင် ဗိုက်ထဲမှာ ကလေးတစ်ယောက်လုံးလွယ်ထားပြီး ဘာမျှမသိကြ ခြင်းမှာ မယုံနိုင်စရာပင်။
စာပေမောင်နှမတော်သည် ကျွန်မ၏ဆရာ အိုဂျီဒေါက်တာစိုးလွင်က မိဘများက သမီးအပျိုလေးဗိုက်နာ လို့လာပို့တာ ပြီးတော့မှ ကလေးထွက်လာ၍ မွေးပေးလိုက်ရသည်ဆိုတာမျိုး။
ကြားရစဉ်ကတော့ အမှတ်တမဲ့ပင်။ အတော်နမော်နမဲ့နိုင်သည့် မိသားစုပါလား။ မိန်းကလေးကရော ကိုယ်ဘာဖြစ်နေ တာကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် မသိနိုင်အောင် အ, လှချေလား။ သြော်. . . နယ်မြို့လေးတွေမှာဆိုတော့ ရှိပေမပေါ့လေဟု တွေးမိသည်။
ဟော … အခုတော့ ဒါရန်ကုန်မြို့မှာလေ။
လူစည်ကားရာ မြို့၊ အသိပညာတွေ လျှံထွက်နေသောမြို့၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ နီးနီးလေးမှာ ကြားသိမြင်နေရပြီး အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးက အစိုးရက ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နေသော မြို့၊ သည်လိုမြို့မှာ သည်အဖြစ်မျိုးက ရုပ်ပျက်လွန်းလှချေလား။
ပြီးတော့ စမ်းသပ်ပြီး ခန့်မှန်းရသလောက် ကလေးကသေးသေးကွေးကွေး မဟုတ်၊ ရင်ညွန့်နှင့်ဆီးခုံ ကြားနေရာအပြည့် ကိုယ်အင်္ဂါလေးများ စမ်းသပ်မိနေတာ ထွားမှထွား။
သူမ၀တ်ထားသော ဘောင်းဘီကတော့ ခါးဝတ်နေရာမှာမတော်၍ ချိတ်နှင့်ဆွဲချိတ်ထားသည်။ အထဲက ကလေးငယ်အစား မသက်မသာရှိလိုက်တာ။ ဘောင်းဘီကို မရမကတော်အောင်ချိတ်နှင့် ဖိသိပ်ဝတ်ထားသည်။ အထဲမှာ ဘယ်သို့ရှိမည်မသိ။
အပေါ်က စပို့ရှပ်ခါးရှည် ဖားဖားကြီးက အုပ်ထားတော့ ဘောင်းဘီခါးမတော်တာ ဘယ်လိုမျှ မသိနိုင်။
ယခုခေတ် မိန်းကလေးအင်္ကျီတွေကလည်း ဂါဝန်တွေလို ရှည်ရှည်ဖားဖားကြီးတွေ၊ ပေါင်လယ် လောက် ဖားလျားကျနေမှ ဖက်ရှင်ကျသည် ထင်နေကြတာ။ အောက်က ဘောင်းဘီတိုနှင့် တွဲဝတ်ကြသည်။ သူ့ခေတ်နှင့်သူတော့ လှသည်ထင်နေကြသည်။
သူတို့စတိုင်လ်က တော်ရုံဗိုက်ကြီးလည်း မသိနိုင်တော့ အံကိုက်ပင်။ မိဘမောင်ဖားများလည်း မရိပ်မိကြဘူးထင်ပါရဲ့။ ရာသီလာလား မေးတော့လည်း “ဟုတ်ကဲ့” တဲ့။ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီ။ ကိုယ့်လက်ကိုယ် ယုံပေမယ့် ကျွန်မကအပျိုပါ ဆိုလာသူတစ်ဦးကို အသားလွတ်တော့ စတင်မစွပ်စွဲဘဲ Ultrasound ရိုက်ခိုင်း လိုက်သည်။
“အထဲမှာ အလုံးလိုလို တွေ့ရတယ်။ မတော်လို့သား သားအိမ်အလုံးတွေ၊ အကျိတ်တွေဖြစ်နေရင်ခက်မယ်။ ခြေထောက်ရောင်တာ အကြောင်းရင်းလည်း ရှာတွေ့နိုင်တာပေါ့” ဆိုပြီး မသိမသာ USG ရိုက်ခိုင်းလိုက်ရသည်။ တစ်ညလုံး ထိုမိန်းကလေးအကြောင်း ခေါင်းထဲကမထွက်။ အမေကိုလည်း ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။
နောက်တစ်နေ့ညနေမှာ သူတို့အုပ်စုကို အစောဆုံးတွေ့ရသည်။ လူကလည်း ရှင်းနေသည်။ အမေနှင့် အဒေါ်က အနားမှာ။
သူအမေဖြစ်သူကို မြင်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမကောင်း။ သမီးအပျိုလေးဟု တယုတယအုပ်ထိန်းခဲ့သူ မိခင်ရင်မှာ ဘယ်လိုရှိလိမ့်မည်လဲ။ သမီး၏ဗိုက်ထဲမှာ မွေးခါနီးသန္ဒေသားလေး တလွယ်တပိုးရှိနေတာကို နည်းနည်းလေးမျှ ရိပ်မိဖော်တောင် မရသည့်အမေပါလား။ ဒါတွေဟာ ၀တ္ထုတွေထဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကူးယဉ်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်း မဟုတ်ဘူး။
အမေဖြစ်သူ ကမ်းပေးလာသည့် USG အဖြေစာရွက်လေးကို ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စမ်းသပ်လာခဲ့သည့် ကျွန်မလက်များ၏ တွေ့ရှိချက်အတိုင်းပင်။ သည်မှာ ပိုလာတာက ကိုယ်ဝန် ပတ် (၃၀)၊ ယောက်ျားလေးတဲ့။
မိမိတို့၏ ပယောဂဖြင့် ရှင်သန်ကြီးထွားနေသည့်အပြစ်ကင်းသော သန္ဒေသားယောက်ျားလေးတစ်ဦး ကတော့ မိခင်၏ ၀မ်းကြာတိုက်ထဲမှာ မွေးဖွားရန် အသင့်ရှိချေပြီ။ ဒါကို သူတို့တာဝန်ယူရတော့မည်။ ဒီအချိန်မှာ လက်ထပ်ပေးလိုက်လျှင်လည်း နောက်နှစ်လခန့်မှာ နေ့စေ့၊ လစေ့ သားကလေးမွေးဖွားလာတော့ ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ။
လူမှုရေးပြဿနာများကို ၀င်ရှင်းပေးဖို့အထိတော့ ဆရာဝန်မှာ တာဝန်မရှိ။ သို့ပေမဲ့ မိန်းကလေးကို ဆူဆူပူပူ ခြေလွန်လက်လွန်မလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပြီးသားကို ပြေလည်အောင် နည်းလမ်းကြံဆဖို့တော့ လမ်းညွှန်အကြံပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သည်အချိန်မျိုးမှာ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ ဖျက်ချတာမျိုး သွားမလုပ်ဖို့၊ အသက်အန္တရာယ် အလွန်နီးလှကြောင်း သတိပေးလိုက်ရသည်။
“သူ့အဖေက သတ်မှာ” ဆိုသည့် ညည်းသံလေးတော့ မိခင်ဖြစ်သူထံမှ ထွက်လာသည်။ သမီး၏ ရည်းစားကိုသိသလားဆိုတော့လည်း “သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးအိမ်ထဲမှာထားတာပဲ” ဟူသောစကားကြားရသည်။
“အိမ်ထဲမှာထားသော သမီးအပျိုလေးများအတွက်”မိဘများ၏အုပ်ထိန်းပုံ နည်းလမ်းကားထင်သ လောက်မလွယ်ပါ။
သူတို့ပြန်သွားအပြီးမှာ မိန်းကလေးတို့အတွက် သည်လိုကိစ္စမျိုးနှင့် မတိုးမိစေဖို့ လိင်ကိစ္စပညာပေးရန် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့၏ တာဝန်နှင့်မကင်းသလိုခံစားမိရပါသည်။
မိခင်တို့တွက် သမီးအပျိုလေးနှင့် ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးနေဖို့အခြေအနေ မပေးခဲ့သော် အိမ်ထဲထည့်ထားရုံဖြင့် စိတ်ချမနေသင့်ပါ။ သည်လိုကိစ္စမျိုးကား သံကွန်ချာ အထပ်ထပ်အခါခါ အုပ်ထားသော်မျှ စိတ်မချရ။
အကောင်းဆုံးကတော့ သမီးအပျိုဖော်ဝင်သည်နှင့် သိသင့်သိထိုက်သည်များကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အသိပေးသွားရမည်။ ထို့အတွက် မိခင်(အုပ်ထိန်းသူများ)ဘက်မှလည်း အခြေခံမိန်းကလေးကိစ္စတို့ကို ဦးစွာ နားလည်သိရှိထားသင့်ပါသည်။
ဆရာဝန်တို့လည်း မ, သဘာဝကိစ္စများကို အထပ်ထပ်အခါခါပြောပြကြ၊ ရေးသားကြနှင့် အပ်ကြောင်း ထပ်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းအနေနှင့်ပင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ၊ ရှုထောင့်မျိုးစုံနှင့် အဖန်ဖန် ပညာပေးဟော ပြော ရေးသားပြီးခဲ့သည်မှာ မရေမတွက်နိုင်တော့။
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတာ့ ထိရောက်သွားသည်ဟု ပြောနိုင်မည်ထင်သည်။ ကျွန်မတို့အနီးအနား မှာ သည်လိုပြဿနာတွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ဟု ထင်နေဆဲ။
“ပြောမယုံ၊ ကြုံဖူးမှသိ”ဆိုသည့် စကားနှင့်အညီ ကွက်တိမှန်နေအောင် လာကြုံရသည့် သည်အဖြစ်မျိုး ကြောင့် မ,သဘာဝပညာပေးတွေဟောပြောရေးသားနိုင်လွန်းလှပြီဟု အထင်ရောက်နေသည့်အဖြစ် ကျွန်မတို့၏ ပစ်မှတ်များကား လွဲနေတုန်းပင် ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါသည်။
သို့အတွက် မိန်းကလေးတို့၏အန္တရာယ်များအကြောင်း ကျွန်မ၏ပဲ့တင်သံများကား မဆုံးနိုင်အောင်ရှိချေ ပါတော့မည်။
ပြောပါများတော့ ဘာမျှမသိတော့သည့်အဖြစ်မရောက်အောင် လိုတိုရှင်း၊ နားထဲဒက်ထိဝင်အောင် တစ်နည်းလှည့်ပြောချင်ပါသည်။ အချိန်မရသောခေတ်ကြီးထဲမှာ အချိန်မရသော မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၊ ရသမျှအချိန်အတွက် ဖတ်ကြ၊ မှတ်ကြ၊ တစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြကြပြီး နိုင်ငံ့သမီးရတနာ အပျိုစင်လေးများကို စံချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
(၁) အသက် ၉ နှစ်မှ ၁၄ – ၁၅ နှစ် (အချို့သော ၁၆-၁၈နှစ်အထိ) အတွင်း မိန်းမကိုယ်မှ ဓမ္မတာသွေးဆင်းတတ်ကြောင်း အလျဉ်းသင့်သလို ပြောထားပါ။
(၂) ထိုကိစ္စသည် သဘာဝဖြစ်ကြောင်း၊ ရှက်ရွံ့အားငယ်စရာမလိုကြောင်း၊ သန့်ရှင်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်တတ်ဖို့ အသိပေးပါ။
(၃) ထိုကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ယောက်ျားလေးများနှင့် အနေအထိုင် သတိထားရန်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတတ်ပုံများ ပြောပြထားပါ။
(၄) ယောက်ျားလေးများကို တရားလွန် ရှောင်ရှားရှက်ရွံ့နေစရာလည်းမလိုဘဲ ပုံမှန်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဖြစ်ပေါင်းရန်။
(၅) မိမိတုိ့၏ လျှို့ဝှက်လုံခြုံအပ်သော နေရာများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအလေးပေးရန်။
(၆) မိမိ၏ ပုံမှန်ဓမ္မတာပေါ်နေရာမှ ထိမ်သွားလျှင် မိခင်(အုပ်ထိန်းသူ)ကိုအသိပေးရန်။ (ဓမ္မတာ မလာသောအကြောင်းများ အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် ကိုယ်ဝန်ရှိနေ၍ မလာခြင်းကား အပျိုတွေအတွက် အထူးသတိထားသင့်သောအချက် ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောပြထားရန်)
(၇) မည်သို့သော အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ (လက်မထပ်မီ) ဆန့်ကျင်ဘက်ယောက်ျားများနှင့် ဆိတ်ကွယ်ရာတွင် မတွေ့ဆုံမိရန်။
အထူးသဖြင့်တော့ ဟိုမသွားရ၊ သည်မသွားရ၊ ဘာမလုပ်ရ၊ ညာမလုပ်ရဟု အမိန့်အာဏာသံဖြင့် အုပ်ထိန်းမည့်အစား ဘာကြောင့်သတိပေးတားမြစ်ရကြောင်းကို အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းလင်းအသိပေး ထားပြီးဟု အုပ်ထိန်းခြင်းက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ညနေဆေးခန်းများထဲမှ ကြုံရသည်များအတွက် ပဲ့တင်ထပ်လိုက်ရပါသည်။